HomeWararka CiyaarahaTottenham, West ham iyo Inter Milan oo baacsanaya weeraryahanka kooxda Chelsea Giroud
Tottenham Hotspur iyo West Ham United ayaa qorsheynaya in ay bisha Janaayo u dhaqaaqaan weeraryahanka Chelsea Olivier Giroud oo aan ka booska helin kooxdiisa.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa guul muhiim ah ku hoogaamiyey xilli dambe kooxda Frank Lmapard kulankii ay la ciyaareen kooxda Rennes ee Champions League habeenkii talaadada isagoo ka caawiyay kooxdiisa inay xaqiijiso booskeeda, si kastaba ha noqotee, wuxuu inta badan ku dhibtooday inuu ciyaaro xilli ciyaareedkan 2020-21.
Tababaraha kooxda Chelsea Frank Lampard ayaa dhawaan cadeeyay muhiimada uu leeyahay weeraryahanka ku guuleystay Koobka Adduunka, si kastaba ha ahaatee, tababaraha reer France ayaa dhawaan qirtay inuu ka tagi karo garoonka Stamford Bridge bilowga sanadka 2021 ilaa iyo inta uu ciyaarayo.
Sida laga soo xigtay Calciomercato, ayaa sheegaya kooxaha London West Ham Utd iyo Tottenham ayaa raadinaya 34 jirkaan iyadoo labada kooxood ee reer London ay ka fiirsanayaan inay u dhaqaaqaan marka uu furmayo suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Xiddiga heerka caalami ee dalka France oo labo jeer shabaqa soo taabtay sideed kulan oo u ciyaaray Lampard ololahan, waxa oo ku dhow yahay galo lixda bilood ee ugu dambeysa qandaraaskiisa haatan ee kooxda ka dhisan Galbeedka London.
Inter Milan ayaa sidoo kale la sheegayaa inay xiiseyneyso inay heshiis la gasho weeraryahankii hore Montpelier. Kooxda West Ham United kaliya ayuu boos joogta ah ka heli karaa markii la barbar dhigo kooxaha kale ee doonaya laacibka, dhanka kale waxa oo u muuqdaa inuu oo doonayo inuu sii joogo Premier League halkii uu ku biiri lahaa kooxda reer Talyaani.